Firefox 92 yakatoburitswa uye inouya nekutungamira kweHTTPS, WebRender yemunhu wese uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Firefox 92 yakatoburitswa uye inosvika nekutungamira kweHTTPS, WebRender yemunhu wese uye nezvimwe
Darkcrizt | | Zvirongwa
Shanduro itsva ye Firefox 92 yakatoburitswa kare pamwe nekusimudzira kune-refu-rutsigiro shanduro 78.14.0 uye 91.1.0.
Mune iyi vhezheni itsva yebrowser tinogona kuwana dzakasiyana shanduko uye yezvakakurumbira iyo kugona kuendesa wega kuHTTPS uchishandisa DNS rekodhi "HTTPS" seanalogog yemusoro weHTTP Alt-Svc, iyo inobvumira sevha kutsanangura imwe nzira yekuwana saiti.
Pakutumira mibvunzo yeDNS, kuwedzera kune "A" uye "AAAA" marekodhi ekuona IP kero, iyo DNS rekodhi "HTTPS" yave kukumbirwa zvakare, kuburikidza iyo yekuwedzera yekubatanidza yekumisikidza parameter inopfuudzwa.
Chimwe chinhu chitsva cheiyi vhezheni itsva ndechekuti WebRender iripo nekumira kune vese vashandisi (Linux, Windows, macOS uye Android pasina zvakasara), iko kuvhurwa kweFirefox 93, rutsigiro rwezvisarudzo zvekumisa WebRender ruchamiswa uye injini iyi ichave inosungirwa.
Mukuwedzera marongero emapeji ane ruzivo nezve zvikanganiso muzvitupa akagadzirwazve uye rutsigiro rweyakakodzera vhidhiyo yekutamba mune yakazara Ruvara renji (Yakazara RGB) yaitwa.
Mune iyo shanduro ye MacOS inogonesa rutsigiro rwemifananidzo neICC v4 mavara profiles, Chinhu chakawedzerwa kuFaira menyu kukoka macOS Kugovana chimiro, iyo yakarongedzwa pani dhizaini yakafanana neyakajairika mafashoni eFirefox.
Yakagadziriswa nyaya pamwe nekudzikisira kwekuita pamatepi anogadziriswa nenzira imwecheteyo seti ine dialog yakavhurika yekuzivisa.
Pamusoro pehunyanzvi uye kugadzirisa bug, 8 kusagadzikana kwakagadziriswa muFirefox 92, 6 dzayo dzinoratidzwa sedzine njodzi, Mashanu acho anokonzerwa nezvinetso zvekurangarira, senge buffer inoputika uye kuwana kune dzakatoburitswa ndangariro nzvimbo.
Matambudziko aya zvinogona kutungamira mukuitwa kwekodhi anorwisa paanovhura akanyatsogadzirwa mapeji. Imwe njodzi ine njodzi, CVE-2021-29993, inobvumira iyo Android vhezheni kutsiva zvinongedzo nekunyengedza iyo "dhamira: //" protocol.
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo yeiyi vhezheni nyowani, unogona kutarisa iyo ruzivo mu inotevera chinongedzo.
Maitiro ekuisa kana kugadzirisa iyo nyowani vhezheni yeFirefox paLinux?
Vashandisi veFirefox vasina kuremadza otomatiki zvigadziriso vanogashira iyo yekuvandudza otomatiki. Avo vasingade kumirira kuti zviitike vanogona kusarudza Menyu> Rubatsiro> NezveFirefox mushure mekumisikidzwa zviri pamutemo kuti utange bhuku rekuvandudza webhurawuza.
Iyo skrini inovhura inoratidza iyo yazvino yakaiswa vhezheni yewebhu browser uye inomhanya cheki yekuvandudzwa, chero iko kushanda kuchigoneswa
Imwe sarudzo yekuvandudza, ndizvozvo uri mushandisi weUbuntu, Linux Mint kana chimwewo chinobva paUbuntu, Unogona kuisa kana kugadzirisa kune iyi nyowani vhezheni nerubatsiro rwePPA yebrowser.
Izvi zvinogona kuwedzerwa kuhurongwa nekuvhura terminal uye nekuita unotevera kuraira mairi:
Kana iri Arch Linux vashandisi uye zvigadzirwa, ingo mhanya mune terminal:
Kana kuisa ne:
Finalmente kune avo vanosarudza kushandisa Snap mapakeji, ivo vanozokwanisa kuisa iyo nyowani vhezheni nekukurumidza kana ichinge yaburitswa mune Snap zvinyorwa.
Asi ivo vanogona kuwana iyo package zvakananga kubva kuMozilla's FTP. Uine rubatsiro rwechiguniti nekunyora murairo unotevera:
Uye kuisa pasuru isu tinongonyora:
sudo snap install firefox-92.0.snap
Chekupedzisira, iwe unogona kuwana bhurawuza neyazvino nzira yekuisa iyo yakawedzerwa "Flatpak". Kuti vaite izvi, ivo vanofanirwa kuve nerutsigiro rwemhando iyi yepakeji.
Kuisa kunoitwa nekunyora:
Para zvimwe zvese zvekuparadzirwa kweLinux zvinogona kurodha pasi mabhagaari kubva chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Firefox 92 yakatoburitswa uye inosvika nekutungamira kweHTTPS, WebRender yemunhu wese uye nezvimwe
Zvirinani mu manjaro ini handichashandisi repostory vhezheni nekuti ivo (vese firefox uye thunderbird) yechinyakare, saka nzira iri nyore yekuyedza ndeye kurodha pasi firefox faira kubva kune yepamutemo peji (faira nekuwedzera tar.bz2) uye unzip iyo mune chero dhairekitori uye unomhanya naro zvakananga kubva ipapo, ikozvino uchave uine firefox iyo inovandudzwa yakananga kubva kune yepamutemo peji
Taizvitarisira kubva kuWhatsApp, asi kwete kuti ProtonMail yakapa IP yemumiriri weFrance kuti abatsire kusungwa kwake
Wormhole inokutendera iwe kutumira mafaira akavharidzirwa kusvika ku10GB mahara, sarudzo yakanakisa kubva kuFirefox Tumira